नृत्य गममी भालू प्रदर्शन कसरी गर्ने
Gummi भाडा कैंडी प्लेस परीक्षण ट्यूब मा पोटेशियम क्लोराइनेट मा राख्नुहोस र बैंगनी आगो को बीच यो नृत्य हेर्नुहोस्। यो चौंका प्रदर्शन एक दृढ उत्पादन-अनुकूल प्रतिक्रियाको उदाहरण हो, साथै यो धेरै रमाइलो छ।
समय आवश्यक छ: तुरुन्त
एक ताप स्रोत मा एक ठूलो टेस्ट ट्यूब सेटअप गर्नुहोस्, जस्तै कि बन्ससन बर्नर। टेस्ट ट्यूबमा सानो मात्रामा पोटेशियम क्लोरीरेट थप्नुहोस् र यसलाई तातो नदिनुहोस् जबसम्म यो पिच्छे हुन्छ। सही रकम महत्वपूर्ण छैन ... एक सानो स्कूपको लागि लक्ष्य।
लामो-सशक्त भाषा प्रयोग गरेर, Gummi भाडा कैंडीलाई परीक्षण ट्यूबमा छोड्नुहोस्।
यो सजिलो हो! Gummi बियर्स, पोटेशियम क्लोरीट, र ओक्सीजन मा sucrose को बीच प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड , पानी र पोटेशियम क्लोराइड को उत्पादन गर्दछ।
सुरक्षा चश्मे र ल्याब कोट सहित उचित सुरक्षा सावधानीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। सल्लाह दिईयो, प्रतिक्रिया धेरै बलियो छ कि टेस्ट ट्यूब घुमाउन सक्छ। वयस्क पर्यवेक्षण आवश्यक छ।
तुरुन्त आगो प्रदर्शन नृत्य Gummi भालू डेमो धेरै समान छ।
यो प्रदर्शन गर्न अर्को तरिका Gumum भालू को ठंड पोटेशियम क्लोरीनेट को माथि सेट को छ। जब तपाईं प्रतिक्रिया सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ, यो परीक्षण ट्यूबको सामग्रीमा सल्फरिक एसिडको एक जोडी थपेर प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।
गम्मी भाडा कैंडी
ठूलो टेस्ट ट्यूब
बन्ससन बर्नर वा अन्य ताप स्रोत
कसरी ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टलको जियोडेस बनाउन
बकिङ पाउडर पकाउनुहोस्
यदि तपाईं फिर्ता करहरू पाउनुभयो भने तपाईं एक अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
के मैले करको डिग्री कमाउनु पर्छ?
मांग को परिभाषा
जॉन डाल्टन जीवनी र तथ्य
पोखरी प्रदूषण: प्रकारहरू, स्रोतहरू, र समाधानहरू
पैसाको बारेमा प्रसिद्ध उद्धरण
एक राम्रो GRE स्कोर के छ? यहाँ कसरी भन्न सकिन्छ
क्लोटोनिया जोओकिन डोर्टिकस
Marian राइट Edelman उद्धरण
आठ संस्थापक फसल र कृषि को उत्पत्ति
संसारको सबैभन्दा ठूलो झील
डाल्टनको व्यवस्था गणना उदाहरण
रसायन विज्ञान र विज्ञान मा Aether परिभाषा
मिनेसोटा विश्वविद्यालय, एसएटी र एक्ट डेटा विश्वविद्यालय
अंग्रेजी हितोपदेश हात तल बुद्धि
Atahualpa को जीवनी, अन्तिम राजा को Inca
नि: शुल्क एमबीए कार्यक्रम
विज्ञान यूनिट रूपान्तरण हास्य
विश्वविद्यालय ओहियो ओफियोमा स्कूलमा प्रवेश गर्न एसएटी स्कोर
पेकिङ्गेस डगको इतिहास
"रेभर" (ड्रीम गर्न) को लागि कन्जगमेन्ट सिक्नुहोस् फ्रान्समा